အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး web browser - AppsAPK
အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး web browser
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး web browser
စမတ်ဖုန်းများ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တိုင်းအလွန်သေးငယ်သောအရာအဘို့ထိုသူတို့အထဲကရိုက်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ငါတို့ device ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့ default browser ကိုသုံးစွဲဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်ထွက်ရှိအန်းဒရွိုက် device များအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အစာရှောင်ခြင်း browser များအများအပြားရှိပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတစ်တစ်တန်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီတတွေ့ရှိရန်သေချာပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာစာရင်းပြီအန်းဒရွိုက်တွေအတွက် Web browser များအများစုဟာတစ်ဦးအပျော်အပါး browsing စေနဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာနောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထားတဲ့ပေါ့ပါးဖြစ်ကြသည်။
Android အတွက်တချို့ကက်ဘ်ဘရောက်ဇာအထူးသီးသန့်တည်ရှိမှုအပေါ်ပိုကောင်းတဲ့အာရုံရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါပြီ။ ဤရွေ့ကားခြေရာခံခြင်း cookies များကိုပိတ်ဆို့နှငျ့သငျကြော်ငြာရှင်များကိုလိုက်နာနိုင်သောမည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာများချန်မထားကြဘူးသေချာစေရန်လေ့ရှိပါတယ်။
ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး web browser မှာကွညျ့ကွစို့
အဆိုပါ UC Browser ကို ကလျင်မြန်စွာသက်ရောက်ကတည်းကထိပ်တန်းရာအရပ်ကိုကြာ, အလွန်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များဟာ host လာပါတယ်။ ဒက်စ်တော့အဘို့အ UC Browser ကိုတစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အပလီကေးရှင်းကိုလိုက်နာဖို့အားလုံးကိုအစုံပါပဲ။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 2GB သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို RAM ကိုအတူကိရိယာများပေါ်တွင်စာမျက်နှာတင်ပေး၏ hardware acceleration ကိုထောက်ခံကြောင်းပေးထားပါတယ်။ လောလောဆယ်သာအနည်းငယ်ဖုန်းများအတူတူပူဇော်ပေမယ့်လာမည့်မော်ဒယ်များဒီစံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူပါကကြည့်ရှုသည်။
UC Browser ကို APK ကို မျိုးစုံဖိုင်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြည့်အဝဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့်အတူကြွလာ။ သငျသညျနှေး connection ပေါ်တွင်လျှင်ဥပမာ,, သငျသညျကိုသာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဒီ app ကသင်၏အင်တာနက်မြန်နှုန်းဖို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သောစာမျက်နှာ၏ဗားရှင်း Auto-ဝန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါ Firefox ကို အာရုံစူးစိုက်က Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး browser ၏ဒီ list ထဲမှာဒီနေရာမှာဖော်ပြထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါဟာ extension ကိုထောက်ခံပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့် Mozilla ၏အန်းဒရွိုက်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်များကို phishing စစ်ဆေးသည်ကိုကူညီ - ဒါဟာ Google မှကို Safe Browsing ပါရှိပါတယ်။ သင်ကမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်မြင်ကြတဲ့အမှိုက်သရိုက် box ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်လက်ရှိ session ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Firefox ကိုအာရုံစိုက်ပိတ်ဖို့အခါတိုင်း, ရှိသမျှကိုသင်၏ browsing history ဖျက်ပါမည်။ Mozilla ကတော်တော်အလေးအနက်ထား app ကိုယူပြီးသည်တစ်ချိန်ကနေသည်ကိုသင်အသစ်တစ်ခုကို update ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Google က Chrome ကို အဘယ်သူမျှမမိတ်ဆက်စကားလိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောင်း၏ရုပ်ဖျက် Mode ကိုအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, လိပ်စာဘားနှင့်အော်တိုဝစွာပုံစံရွေးချယ်မှုများအနေဖြင့်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်ကြောင့်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကိုလုပ်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ။ သငျသညျ Chrome ၏ပင်မစာမျက်နှာသင်စိတ်ဝင်စားအံ့သောငှါနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများပြသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစငျသညျပိုမိုလွယ်ကူ access များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များကိုထည့်သွင်းဖို့တစ်ခု option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းမှာ website တစ်ခုဖြတ်သန်းသွားချင်တယ်ဆိုရင်သင်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေလျှင်ပင်မကယ်နဲ့နောက်မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ကိရိယာများအတူတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့သင်တို့ကို Google account တစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် ပို. ပင်အသုံးဝင်သည်။
အော်ပရာ Touch ကို
အော်ပရာယခုစမတ်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့ desktop ကို browser တခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာမြင့်မားစိတ်ကြိုက်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်ချက်မှပြောင်းလဲနိုင်သည်သော screen ပေါ်မှာမဆိုဒြပ်စင်ခဲရှိပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ကုမ္ပဏီတဦးတည်းလက်အသုံးပြုရန် app ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ သငျသညျ, ရှာပိတ်ဖို့, နှင့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်မှာလွယ်ကူသော-to-access ကို icon တွေကိုသုံးပြီး refresh နိုင်သည် - တစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူအားလုံး။ ဒါဟာအစလုံခြုံရေးအစိုးရိမ်သောသူတို့အဘို့ကြီးစွာသော option ကိုဖြစ်သောအသုံးပြုသူများ voice commands ကို အသုံးပြု. ရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ သူတို့ကအစတစ်များ Opera Mini APK ကို သောအလင်းဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကိုအသုံးပြုကြပါပြီသို့မဟုတ် Windows 10 သုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်မယ်လို့များမှာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge။ desktop ပေါ်မှာဗားရှင်းနှင့်မိုဘိုင်း application ကိုကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပြီးကတည်းကသူတို့ကိုအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိသေး၏။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge မှလတ်တလော update ကိုဆင်းရဲသောသူကိုအရည်အသွေးသတင်းအစီရင်ခံဘို့အလံထားပြီးကြောင်း website တစ်ခုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါသင်သတိပေးတဲ့ tool တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာအစသင့်သည် Microsoft account တစ်ခုထဲသို့ log နှင့်စက်ကိရိယာများကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ desktop ပေါ်မှာဗားရှင်းအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသင်ကဖြစ်ချင်ပါတယ်သည်မဟုတ်သကဲ့သို့ရင်တောင်လျှောက်လွှာကိုသင်အထူးသဖြင့် Microsoft ၏အခြားအရာပူဇော်သက္ကာကဲ့သို့အမကျင့်လျှင်ပင်, တစ်ဦးပါထိုက်သည်။
Puffin လက်ရှိစျေးကွက်အတွင်းအမြန်ဆုံးမိုဘိုင်း browser များအကြားဖြစ်လူသိများသည်။ အဲဒီအကြောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း developer များ browser ကိုအမြန်နှုန်းအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးယဇျပူဇျောပါဘူးသေချာစေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကို encrypt နှင့် built-in ကြော်ငြာ-blocker နှင့်တကွကြွလာ။ Puffin ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့စာရင်းဇယားကိုင်တွယ်ဘို့ဤမျှအပေါ်တစ်ဦးကို virtual Controller, ကို virtual cursor နှင့်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော input ကိုရှေးခယျြစရာ, ပေးထားပါတယ်။
Flynx Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်အခြားကောင်းတဲ့ browser တခုဖြစ်တယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျက၎င်း၏အလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာ browser များအနေဖြင့်တစ်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုတက်ယူပြီး၏, ထို browser ကိုပြတင်းပေါက်ထိပ်ပေါ်မှာရှိသတဲ့။ သငျသညျ Facebook နှင့်သငျသညျမှတဆင့်စာပို့သို့မဟုတ် scrolling ကြသည်မှန်လျှင်လျင်မြန်စွာ browser ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါက pop-up လိမ့်မယ်ရှိပြီးသား App ကိုထိပ်ပေါ်မှာ။ သငျသညျနောက်ခံကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ကမှတဆင့်သွားချင်သည့်အခါအိမ်ရှေ့ကဆွဲယူဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Pinterest နှင့် Facebook ကအဖြစ်အများဆုံးလူကြိုက်များ applications များ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် In-app ကို browser များနှင့်အတူလာနေစဉ်, Flynx ကိုင်တွယ်ရန် ပို. လွယ်ကူပြီးပိုမိုအသုံးဝင်သည်။
ကီဝီ Browser ကို
Google Chrome က၏ source code ကို posted ပြီးနောက်လွတ်လပ်သော developer များပတ်ပတ်လည်ကစားစတင်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ် Kiwi ဖြစ်ပါတယ်။ ကီဝီအခြေခံအားဖြင့် Google ရဲ့ Webkit နှင့် Blink အင်ဂျင်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော Chrome ကို-based browser တခုဖြစ်တယ်။ သင့်အနေဖြင့်စာမျက်နှာဝန်မြန်နှုန်းတော်တော်လေးဆင်တူကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကိုဖြစ်စေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ ကီဝီတစ်ဦးကိုညဉ့် Mode ကိုတစ်ခုနှင့် In-built ကြော်ငြာ Blocking အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မှောင်မိုက် mode ကိုသုံးစွဲသူညဉ့်အချိန်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင် Kiwi အမှန်တကယ်ကို Google က Chrome app ကိုထက် သာ. ကောင်း၏။
အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး browser ၏ဤစာရင်းတွင်နှင့်အတူ, သငျသညျယခုထွက်ထိုအရပ်၌အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ browser များတဲ့တရားမျှတတဲ့စိတ်ကူးရပါလိမ့်မယ်။ မရအရာခပ်သိမ်းကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ရဲ့ default အဘရောက်ဇာကိုအပြင်ဘက်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ features တွေထွက်စစ်ဆေးနှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးထွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့တဘို့ကိုသွားပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
အကောင်းဆုံး web browser Android အတွက်အကောင်းဆုံး web browser Android အတွက် web browser အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းများအတွက် Web browser